Dawlada Jarmalka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub oo wali ku wareersan cidi ka dambaysay Qaraxi magaalada Beriln – Xeernews24
Dawlada Jarmalka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub oo wali ku wareersan cidi ka dambaysay Qaraxi magaalada Beriln
22. Dezember 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Baadhitaan lagu doonayo in lagu soo qabto qofkii ka dambeeyay weerar loo adeegsaday gaadhi weyn oo lagu qaaday suuq ku yaal magaalada Berlin dalka Jarmalka ayaa waxa uu ka socdaa dalal ka tirsan qaarada Yurub.
Warqad fasax lagu soo qabanayo nin magaciisa lagu gaabshay Anis oo u dhashay dalka Tunisia ayaa xalay laga soo saaray dalka Jarmalka.
Weerarkan oo ay ku dhinteen 12 ruux ayaa laga dul helay gaadhigii loo adeegsaday aqoonsiga Anis, waxaana la rumeysan yahay in uu ku dhaawacmay gacan ka hadal dhex maray isaga iyo darawalkii waday gaadhiga.
Baadhitaanka xoogiisa ayaa waxa uu ka socdaa gobolka North Rhine-Westphalia(nrw) ee dalka Jarmalka ee ah halka laga bixiyay fasaxa degenaanshaha ee ninka la raadinayo.
Sidoo kale waxaa ay ka socotaa baadhitaanka lagu doonayo in lagu soo qabto ninka ka dambeeyay weerarka magaalada Berlin ayaa waxaa uu ka socdaa dalalka Iceland, Liechtenstein, Norway iyo Switzerland.
Ninkan la raadinayo ayaa la sheegay in uu u safray dalka Talyaaniga sanadkii 2012 kadibna waxa uu tegey dalka Jarmalka sanadkii 2015 halkaa oo uu ka codsaday magangalyaa doon bishii April. Weerarka lagu qaaday suuqa ku yaal magaalada Berlin ayaa waxaa sheegtay mas’uuliyadeeda ururka IS laakiin aan wax cadayn soo bandhigin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/timthumb-1.jpg 452 634 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-22 09:18:302016-12-22 09:18:30Dawlada Jarmalka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub oo wali ku wareersan cidi ka dambaysay Qaraxi magaalada Beriln
Maamulkii Hargeysa oo Aqoonsaday Maamul Beeleed kale oo la mid ah Bariis caag ka sameysan“ oo lagu qabtay dalka Nigeria